Mogadishu and Minnesota Town Hall Meeting
Sida looga Ciiday magaalada Kismaayo
Re-opening of Somali Embassy in Washington
Wareysi: Wasiirka Arr. Dibedda
Wareysi Maryan Mursal
Taleefonno Gudbin Doona Urta
Aabaha Wiilka ku Dhintay Syria oo VOA la Hadlay
Aabaha wiil Soomaali ah oo warbaahaintu tebisay nuu ku dhintay dalka Siiriya kaddib markii uu ku biiray kooxda Daacish ayaa wareysi uu VOA siiyay ku sheegay in aanu hayn caddayn muujinaysa inuu wiilkiisu dhintay.
Somalida Washington D.C. oo Taageeray Safiirka Cusub Somalida ku dhaqan Magaaladan Washington iyo agagaaraheeda ayaa si weyn u soo dhaweeyay safiirka cusub ee Somalia ay u soo magacowday dalkan Mareykanka, Ambassador Cumar Cabdirashiid.
Warbixinno: Geerida Xildhibaan Saado Cali
Allaha u naxariistee Fanaanada Saado Cali Wasame oo ka tirsaneyd baarlamanka Soomaaliya ayaa maanta lagu dilay magaalada Muqdisho. Dilka fanaanada waxaa sheegtay ururka alShabaab. Fanaanada ayaa isla maanta lagu aasay Muqdisho.
Maraakiibtii Somalia oo Yemeni lagu Wareejiyay
Maxkamad ku taalla Yemen ayaa si rasmi ah ugu wareejisey nin ganacsade Yemeni ah saddex markab oo ay horey u lahayd dowladda Somalia oo ku sugnaa Yemen. Ninkan ayaa maraakiibta ku leh lacag deyn ah oo gaaraysa 2 Malyuun oo Dollar.
Falanqayn ku Saabsan Weerarkii Baarlamaanka:
Kadib markii weerar qorshaysan lagu qaaday xarunta Baarlamaanka Somalia, Wasiirkii Ammniga ayaa xilkii iska casilay, Madaxwaynuhuna wuxuu soo gabiyay safar uu ku joogay dalka South Africa, Su'aalaha la iska waydiinayo dhinaca amaanka ayay ka mid yihiin waxyaabaha laga baran karo weerarada noocana.